Knowledges Zone: ( ကွန်ပျူတာ အထူးကဏ္ဍ )Windows လိုင်စင်နံပတ် Product Activation (WPA) ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ
( ကွန်ပျူတာ အထူးကဏ္ဍ )Windows လိုင်စင်နံပတ် Product Activation (WPA) ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ
Windows Product Activation သို့မဟုတ် WPA ဆိုတာ Microsoft Corporation က Windows XP မှစ၍ လက်ရှိ Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 နှင့် Windows7တွေ စသည့် Windows operating system version အားလုံးရဲ့ license validation အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရားမ၀င်သုံးစွဲတဲ့ Windows Operating System တွေကို ကာကွယ်ကာ တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရအောင် တစ်နည်းအားဖြင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Products ဟာ Microsoft မှ တရားဝင်ဝယ်ယူထားသော အစစ်အမှန် Products ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးဖို့အတွက်ကို WPA က လုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်တယ်။
ဘာကြောင့် Activate လုပ်ရတာလဲလို့မေးရင်တော့ Microsoft ဟာ ၄င်းရဲ့ ထုတ်ကုန် တွေကို ရောင်းချတဲ့နေရာမှာ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးအတွက် retail license တစ်ခုပဲဆိုရင် နောက်တစ်လုံး အသုံးပြုခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားပါလိမ့်မယ်...။ ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်းမှာ မိမိရဲ့ Microsoft Products ကို စစ်မှန်ကြောင်း Activate လုပ်ပေါ့။ စစ်မှန်တဲ့ Microsoft ရဲ့ Windows Products တစ်နည်းအားဖြင့် Genuine Windows ဆိုတာကတော့ Windows Operating System ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုစဉ် (Install လုပ်စဉ်ပေါ) မှန်ကန်တဲ့ product key ကို Genuine လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက product key (retail license) တစ်ခုဟာ ၀ယ်ယူထားတဲ့အတိုင်း ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးပဲ အသုံးပြုလို့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ တူညီတဲ့ product key ကိုနောက်ထပ် အခြား ကွန်ပျူတာ တစ်ခုမှာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကို pirated copy (ခိုးကူးခွေပေါ့) ဆိုပြီးပြောပါလိမ့်မယ်..
(Windows7ကို Install လုပ်ဆင်မှာ Product Key တောင်းပုံ)
ဒီတော့ မိမိတို့ဟာ ကွန်ပျူတာ တစ်ခုမှာ Windows OS Installation သို့မဟုတ် Windows Products တစ်ခုကို Install လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ၄င်းအား အမြဲတမ်း သုံးစွဲခွင့်ရနိုင်ဖို့ Activate လုပ်ပေးရပါတယ်.. အထက်မှာပြောခဲ့သလို Activate လုပ်ဖို့ အလွန်ဆုံး အချိန်ကို ရက် (၃၀) ပေးထားတယ်ပေါ့။ Activate လုပ်နေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ မိမိရဲ့ Windows က Installation ID code ကို Microsoft အား Internet ကဖြစ်စေ Telephone ကနေဖြစ်စေ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါက Windows ကို Activate လုပ်စဉ်မှာ Option နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့. တစ်ခုက using Internet နဲ့ နောက်တစ်ခုက using Telephone နှစ်ခုပါပဲ။ Microsoft’s licensing system ဟာ မိမိတို့ရဲ့ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Windows Products ကို Genuine ဖြစ်မဖြစ်စစ်ရန်အတွက်ပါပဲ။ အကယ်၍ မိမိရဲ့စက်မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ windows က စစ်မှန်တယ်ဆိုရင် ၄င်းရဲ့ system က Activation ID ကိုထည့်ပေးပါတယ်... Phone နဲ့ activate လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ၄င်း Microsoft’s licensing system ကပေးတဲ့ Activation ID ကို ကိုယ်တိုင် ရိုက်ထည့်ပြီး activation ကို အဆုံးသတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Installaion ID, Activation ID, Product ID, Product Key စသည့်အခေါ်အဝေါ်နဲ့ ကွဲပြားမှုလေးတွေကို အလေးအနက်ထားပြီး ကြည့်စေလိုပါတယ်။
Installation ID မှာ decimal digits ဆိုတဲ့ 0-9 အလုံးရေ (၅၀) ပါဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခု အလုံး (၅၀) ထဲမှာ အောက်ပါ Information Data တွေပါဝင်ပါတယ်။ (မှတ်ချက် Windows7မှာတော့ Installation ID က (၅၄) လုံးပါ။
၁။ Product ID - Windows CD/DVD အဖုံးမှာ alphanumeric value တွေနဲ့ ရိုက်ထုတ်ထားတဲ့ Sticker လေးမှာပါဝင်တဲ့ Product Key ကနေ ရရှိတာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ Windows ကို Install လုပ်စဉ်မှာ ထည့်သွင်းဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Hardware ID - ဒါကတော့ မိမိတို့ Computer ရဲ့ Hardware configuration အပေါ်မှာမှုတည်ပါတယ်။
WPA System က အောက်ပါ Categories ဆယ်မျိုးအား Hardware ID ကိုရရှိရန်အတွက် Checking လုပ်ပါတယ်။
ဒီတော့ Product ID and Hardware ID ကိုပေါင်းထားတဲ့ Installation ID ကိုမှ Microsoft ကိုပို့ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Window အားအစစ်အမှန် ဖြစ်ဖို့ သက်သေ အထောက်အထားတွေကို ရရှိရန် Microsoft ရဲ့ System ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါ စောစောက digits အလုံး ၅၀ ပါတဲ့ Installation ID ကို Decode လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို System က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user side မှာ Product ID နဲ့ Hardware ID ကို Encode လုပ်တယ်.. ဟိုဘက်မှာပြန်လည်ပြီး Decode လုပ်ရတယ်ပေါ့။ ဒီလို Microsoft Windows System ရဲ့ registering လုပ်ဖို့ license key တွေကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် အလုပ်လုပ်သွားတာက msoobe.exe ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ msoobe.exe ဟာ တစ်ကြိမ်ထပ်မက ထပ်ဖွင့်ရင် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Installation ID ကလည်း တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါဖွင့်တိုင်း တစ်ခါပြောင်းတယ်ပေါ့. ဒီနေရာမှာ Installation ID ကိုဘယ်လို ထုတ်လဲဆိုတာ အနည်းငယ် ပြောပါမယ်။ (Based on Windows XP)
အလုံး (၅၀) ပါတဲ့ Installation ID :- 002666-077894-484890-114573-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XX
ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Installation ID key တွေကို စာလုံးအမှားအမှန်စစ်ရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်းစစ်ပါတယ်။
First Group နံပါတ် ခြောက်လုံးထဲက ပထမ ၅ နေရာ
အထက်ပါအတိုင်းပဲ စစ်ထုတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအတိုင်းပဲ ၄င်းရဲ့ process တွေထဲမှာ Decoding, Decryption, Hashing စသည့် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက RAM Amount Range ဟာ Hardware ID ကိုလုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ပါဝင်တယ်လို့ပြောတယ်...
ဒီအတိုင်းပဲ ၄င်းကို ရယူတဲ့နေရာမှာ
ဆိုပြီး ခွဲခြားရယူပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို licenturion မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Original နှင့် ခိုးကူးခွေကို စစ်ဆေးခြင်း
ဒီနေရာမှာ Cases နှစ်ခုနဲ့ စစ်ဆေးပါတယ်
၁။ Product Activation စစ်ဆေးနေစဉ်မှာ Microsoft’s system က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Product key ကို အရင်စစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ မိမိတို့ရဲ့ product key က တစ်ခါမှ အသုံးပြုထားခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင် Hardware ID တွေထဲက Data တွေအားလုံးကို Record လုပ်ပြီး မှတ်သားထားပါတယ်။
(Windows License Sticker)
၂။ အကယ်၍ product key ဟာ တစ်ခါ အသုံးပြုပြီးသွားပြီဆိုရင် Hardware ID ကို ထပ်မံစစ်ဆေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Hardware ID ကလည်း ရှိပြီးသား product key ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Hardware ID နှင့်တူညီတယ်ဆိုရင် Activation ကိုအောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်... ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့က Original Windows ကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုပြီးတော့ Windows ကို format ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ နောက်တစ်ခါ အဲ့ Windows ကိုပြန်လည် အသုံးပြုဖို့ Install လုပ်ကာ Activate လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ၄င်း Windows ဟာ အစစ်အမှန်ဖြစ်၍ Genuine အဖြစ် လက်ခံပါလိမ့်မယ်... အကယ်၍ product key မတူ Hardware ID လည်း မတူဘူးဆိုရင်တော့ ဒီ Windows က pirated copy ပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...
(Windows7မှာ ရက် (၃၀) validate လုပ်ရင်ဖော်ပြပုံ)
ဒီနေရာမှာ မေးလာပါလိမ့်မယ်... ကျွန်တော်တို့က Hard Disk တွေ RAM တွေကို Upgrade လုပ်လိုက်ရင်ကော ဘာဖြစ်မလဲလို့ပေါ့..
ကျွန်တော်တို့ အထက်မှာပြောထားပါတယ်... Hardware ID မှာ categories (၁၀)ခု ရှိတယ်လေ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Hardware Upgrade လုပ်မှုက အများဆုံး သုံးခု ပြောင်းလဲဖို့အထိ Microsoft ရဲ့ Activation System က လက်ခံပါတယ်။ Hardare ID ထဲက (၁၀) ခုထဲက (၇)ခု မှန်တယ်ဆိုရင် ရတယ်ပေါ့။ ၄င်း (၇) ခုထက်ပိုတဲ့ Hardware Upgrade မျိုးကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Microsoft ရဲ့ customer service representative ကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး မိမိရဲ့ ဖြစ်အင်ကို ရှင်းပြရပါလိမ့်မယ်... အကယ်၍ မိမိရဲ့ ရှင်းပြမှုဟာ အကြိုးအကြောင်း မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့ သနားဂရုဏာထားစွာဖြင့် product key အသစ်တစ်ခုကို ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်... ဒါဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ activate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ user information ထည့်သွင်းသွားရင်ပိုပြီးတော့ လွယ်ကူတာပေါ့.. သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ အမည်၊ နေရပ်၊ NRIC၊ မိမိသုံးစွဲနေတဲ့ Product အမျိုးအစား၊ Product Version စသည်တို့ပဲပေါ့။
(Windows7အား phone ဖြင့် activate လုပ်စဉ် ပထမဦးစွာ ကျွန်တော်တို့က windows7အတွက်(၅၄) လုံးပါသော Installation ID ကို ပြောဆို၍သော်လည်းကောင်း phone ၏ keypad မှရိုက်ထည့်၍ သော်လည်းကောင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး Microsoft System မှ confirmation ID ကို retrieve လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်... ၄င်း key တွေကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ )
[Activation was Successful]
(Windows7အောင်မြင်စွာ activate လုပ်ပုံ)
* WPA က အထက်ပါ Installation ID ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ Information တွေကို Microsoft အားမပို့ဆောင်ပါဘူး။ (user information ကတော့ optional ပေါ့ - ထည့်ရင်တော့ ပါတာပေါ့ - မထည့်ရင်တော့ မပါဘူးပေါ့)
* အကယ်၍ phone နဲ့ activate လုပ်တဲ့အခါ မည်သည့် personal information မှမလိုပါဘူး.. ဘယ်လိုမလဲ - ဟိုဘက်က Computer ကနေပြာနေတာလေ...
* WPA ဟာ Microsoft က မိမိရဲ့ ကွန်ပျူတာကို ၀င်ရောက်ခါ Information Data တွေကို ပျက်စီး၊ ဖျက်ဆီးခြင်း လုံးဝ မရှိပါဘူး။
* WPA တစ်ခါလုပ်ပြီးသွားရင် နောက်တစ်ခါ format မချမခြင်း ပြန်လည်လုပ်ဆောင်စရာမလိုပါဘူး။ သူဟာ ရာသက်ပန် အသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်တာပါပဲ။